Rio Ferdinand oo muujiyay sida uu ula dhacsan yahay qaab ciyaareedka xiddig ka tirsan Arsenal – Gool FM
(London) 28 Jan 2020. Halyeeyga reer England ee Rio Ferdinand ayaa muujiyay sida uu ula dhacsan yahay qaab ciyaareedka xiddig ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Arsenal
Da’ayarka kooxda kubadda cagta Arsenal ee Gabriel Martinelli ayaa ka helaya ammaan xoogan shaqsiyaad kala duwan uu qeyb ka yahay ee Rio Ferdinand, kaddib qaab ciyaareedka cajiibka ah uu kaga soo muuqday Gunners xilliyadii lasoo dhaafay.
Xiddiga reer Brazil ee Gabriel Martinelli ayaan dhalinin gool kulankii xalay ay kooxda Bournemouth 1-2 kaga adkaadeen, ciyaar ka tirsaneyd kulamada wareega afaraad ee koobka FA Cup, laakiin qaab ciyaareedkiisa aad ayuu u fiicnaa.
Haddaba Rio Ferdinand ayaa inta uu ku gudi jiray falaqeynta kulankii xalay ayaa wuxuu la dhacay mid ka mid baasaskii cajiibka ahaa uu u gudbiyay saaxiibkiis Bukayo Saka, isla sidaas oo kale ayuu si cajiib ah u caawiyay goolkii koowaad oo uu dhaliyay Saka bilowgii ciyaarta.
Wargeyska “Daily Mail” ayaa soo xigtay hadaladii Rio Ferdinand ee inta uu ku gudi jiray falaqeynta kulankii xalay gaar ahaan mar uu ka hadlayay sida uu ula dhacsan yahay 18 jirkan waxaana ka mid ahaa:
“Wuxuu ku ciyaaraa kalsooni aan caadi aheyn waqtigan la joogo isla markaana aad u xiiso badan”.
“Tan waxaa u sabab ah tababare Mikel Arteta, oo siiya kalsooni buuxda, isla markaana siiya fursad marba marka ka dambeysa”.
“Martinelli wuu ka dhakhso badan yahay sidii aan markii hore u maleynayay, markii ugu horreysay ee aan arkay” ayuu yiri Rio Ferdinand.